Mgbe ị na-a ọhụrụ ekwentị, i nwere na ihu na-ogwu nsogbu - otú nyefee data si ochie ekwentị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ndị ekwentị abụọ na-agba ọsọ ahụ OS, dị ka Android, ị nwere ike mfe nyefee data n'etiti ekwentị abụọ. Otú ọ dị, ihe na-ukwuu siri ike karị mgbe ekwentị abụọ si abụọ dị iche iche nyiwe, Android na iOS ihe atụ. E nwere ụfọdụ free ngwọta site na internet, Otú ọ dị, ha na-enyo na-adị nnọọ mgbagwoju. Iji mee ka ekwentị na ekwentị data nyefe, ga-amasị m ka nwere ike ikwu a ọzọ ngwá ọrụ - na Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-ahuta ka a otu-click ekwentị transfer ngwá ọrụ, na-ebufe music, photos, kọntaktị na ndị ọzọ n'etiti ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ na Android, iOS na Symbian. Amagbu, nri? Ndị na-esonụ akụkụ-egosi na ị zuru ezu nzọụkwụ. Dị na-agụ na.
Ekwentị ekwentị File Nyefee na 1 Pịa
Ekwentị transfer ngwá ọrụ na-enyere gị nyefee music, video, photos, ederede ozi na kọntaktị site na otu cell ekwentị ọzọ.
Nyefee na kọntaktị, music, video, SMS, photos, kalenda na ndị ọzọ site na otu ekwentị ọzọ
Bugharịa data n'etiti abụọ ọ bụla ntị ọsọ na android, iOS na Symbian mfe
Akwado dị iche iche netwọk, dị ka AT & T, Sprint, Versizon na T-mobile
Ndabere a ekwentị na kọmputa na-weghachi gaa na ekwentị ọzọ e mesịrị
Rịba ama: The Mac version anaghị akwado Nokia (Symbian) ekwentị. Ọ na-adịghị ka ị na nkwado ma weghachite ekwentị data.
Easy na mfe iji
Ọ pụghị ịbụ mfe nyefee data site na otu ekwentị ọzọ. Dị nnọọ 1 click, na e mere ihe nile!
Ọ bụghị naanị Nyefee Ndi ana-akpo
Ọ na-enye gị ohere iji nyefee kọntaktị, music, photos, SMS, photos, kalenda, na ndị ọzọ si ekwentị na ekwentị.
Ya n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọtụtụ ntị, dị ka Samsung, HTC, Sony, iDevice, Motorola, na ndị ọzọ.
N'agbanyeghị ma ị ntị nke otu netwọk ma ọ bụ dị iche iche netwọk, ọ dị nnọọ ime nyefe maka gị.
The akwado Files
The faịlụ nwere ike zigara dị iche iche dị ka ndị dị iche iche OS nke igwe. N'ihi ya, tupu na-agụ nkuzi, ị nwere ike ịlele akwado faịlụ mbụ.
The Mac version adịghị ekwe ka ị Weghaa faịlụ ma ọ bụ site Nokia (Symbian) ekwentị.
Nyefee Nokia (Symbian) na Android
Nyefee iOS ka iOS
Nyefee Nokia (Symbian) na iOS
Nyefee Android ka Nokia (Symbian)
Nyefee iPhone ka Nokia (Symbian)
Nyefee Nokia ka Nokia (Symbian)
Otú nyefee faịlụ site na ekwentị ekwentị
1. Wụnye iTunes: Iji nyefee faịlụ na ma ọ bụ site na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, ị chọrọ nwụnye iTunes na kọmputa gị. 2. Nyefee na kọntaktsị na ihe ndekọ: Iji nyefee kọntaktị na iCloud, Google, Yahoo !, Hotmail na ndị ọzọ na akaụntụ, i kwesịrị ịrịba ama na ihe ndekọ na gị isi iyi ekwentị mbụ.
Nzọụkwụ 1. Run ngwá ọrụ a
Mgbe echichi, ị nwere ike na-agba ọsọ ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Na homepage, họrọ na ekwentị ekwentị Nyefee na pịa Malite.
Jikọọ ekwentị abụọ na kọmputa na USB cables. Ekwentị transfer ngwá ọrụ ga-amata ha ozugbo. Mgbe ahụ, dị ka ị na-ahụ screenshot, abụọ igwe na-egosi na ekwentị na ekwentị transfer window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Music, Video, SMS, Photos, Ndi ana-akpo ndị ọzọ si na ekwentị ekwentị
Site ndabara, faịlụ niile na-akwado na-enyocha. N'ihi ya, wepụ gị achọghị faịlụ mgbe nnọọ na ị chọrọ nyefee ụfọdụ n'ime ha. Mgbe ahụ, na-amalite faịlụ transfer site na ịpị Malite Copy. Site mmapụta dialog, ị nwere ike ịlele pasent nke nyefe. N'ikpeazụ, pịa OK mezue nyefe.
Ịgbanwee faịlụ site iPhone ka Android
Nyefee ọdịnaya site iPad ka Samsung
Copy faịlụ site Motorola ka iPhone
Ịgbanwee faịlụ site Nokia ka Sony
> Resource> Nyefee> otú nyefee Data Site na otu na ekwentị ọzọ